Khilaaf Horleh oo Ka Dhex Qarxay Xukuumadda iyo Dowladda Hoose Hargeysa | Gabiley News Online
Khilaaf Horleh oo Ka Dhex Qarxay Xukuumadda iyo Dowladda Hoose Hargeysa
Waxaa soo shaac baxay Khilaaf horleh oo cirka isku sii shareeray oo u dhaxeeya Xukuumadda Somalaland iyo dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, islamarkaana salka ku haya cida maamuleysa dib u dhiska suuqii gubtay ee Waaheen ee Magaalada Hargeysa.
Dhinacyada, ayaa isku mari la, sida ka muuqata hadalo kale duwan oo ay warbaahinta isku mariyeen cida ka shaqeyneysa maamulka iyo dib u dhiska suuqii weynaa ee gubtay ee Hargeysa, inkastoo suuqa uu haatan ka socdo howlo nadaafadeed waxaana taasi mas’uul iska saaray dowladda hoose ee hargeysa.
Maamulka Dowladda Hoose ee Hargeysa oo uu khilaafka kala dhexeeyo Xukuumadda Madaxweyne Biixi, ayaa ku doodaya in looga dambeeyo howlaha shaqo ee Suuqa ,islamarkaana ayna soo faragelin Madaxtooyadu, halka Xukuumadana ay rabto inay maamusho dib udhiska Suuqa gubtay ee Waaheen.
Dhankiisa Wasiirka Howlaha guud ee Somaliland Cabdilaahi Abakor oo ka hadlay arrintan, ayaa sheegay in howlaha nashqadaynta iyo dib u dhiska suuqa Waaheen ay iyagu leeyihiin, isagoo xusay in qandaraaska ay u gudbin doonnaan guddida qandaraasyadda, taasi oo ka cadhaysiisay dowladda hoose ee Magaalada Hargeysa.
“Shaqadan shaqo su Xukuumaddu qabanayso maaha, shaqo ay Dawladda Hoose qabanayso maaha ,shaqada cidda qabanaysaa nidaam ayey maraysaa ,markay nashqadeeda samayso Wasaarada Hawlaha guud iyo guriyeyntu waxa lagu soo wareejin doonaa Guddida qandaraasyada qaran, iyadaa waajibaad keeda sharci ka gudan doonta…”ayuu yiri Cabdilaahi Abakor.
Dhankeeda Dawladda Hoose ee Magaalada Hargeysa oo qoraal ay arrintan kaga hadleyso soo saartay ayey ku sheegtay in marka la dhammeeyo nadiifinta Suuqa gubtay ee Waaheen inay bilaabayso dhismihiisa.